सुर्खेतमा २२ बर्षिय संक्रमित यूवकको मृत्यु - नेपालबहस
सुर्खेतमा २२ बर्षिय संक्रमित यूवकको मृत्यु
| १३:५४:४१ मा प्रकाशित
३० असाेज, सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा थप एकजना २२ बर्षिय कोरोना संक्रमित यूवकको मृत्यु भएको छ । उनको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ ।
आफन्तकोमा बसेर अध्ययन गरिरेका ती युवा यही असोज २८ गते शौचालयमै बेहोस भएका थिए । सुरुमा उनलाई आफन्तले झारफुक गर्न लिएका थिए । त्यसपछि मात्रै देउती अस्पताल लिएका थिए ।
उनको अवस्था जटिल भएपछि २८ गते राति ११ बजे प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । श्वास्प्रश्वासमा समस्या भएकोले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिए पनि बिहीबार साँझ मृत्यु भएको हो । यससँगै कर्णालीमा कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको महाशाखाले जनाएको छ ।
आज नवरात्रको आठौँ दिन, विधिपूर्वक गरियो महागौरीको पूजाराधना ८ घण्टा पहिले
दशैँको मनोवैज्ञानिक पक्ष : चाडपर्वले मानसिक स्वास्थ्य सबल बनाउछ ! ९ घण्टा पहिले
नायक पुष्प र उषाको रोमान्समा मेरो माया लाग्छ र ? ४ घण्टा पहिले
नवरात्रमा पनि खुलेनन मन्दिर, भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरि फर्किए ७ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासमै ‘रअ’का प्रमुखसँग भेट्नु आपत्तिजनक १३ घण्टा पहिले
उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा तत्काल खाद्यान्न ढुवानी माग ८ घण्टा पहिले
कांग्रेसका सबै सांसदले दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने ६ दिन पहिले
कोरोनाबाट विदेशमा थप १७ जना नेपालीको मृत्यु २ हप्ता पहिले
मन्त्रीको मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री ओलीको परिचय नै बदलियो ! ४ महिना पहिले
सुनको भाउ तोलामा एक लाख नाघ्यो ३ महिना पहिले
जातीय विभेदको आरोपमा महिला पक्राउ ५ महिना पहिले
नेप्सेमा तीनपटक ‘सर्किट ब्रेक’ ३ महिना पहिले